हनुमन्तेको ताण्डव : कहाँ चुक्यो सरकार ? कसले गर्यो‍ बदमाशी ? ::Nepali TV
You are here : Home News हनुमन्तेको ताण्डव : कहाँ चुक्यो सरकार ? कसले गर्यो‍ बदमाशी ?
सरोकारवाला भन्छन्ः पूर्वतयारीमा कम्जोरी भयो
भक्तपुर : पद्विरुद्धको पूर्वतयारीमा चुक्दा बिहीबार भक्तपुरमा हनुमन्ते खोलाले ताण्डव मच्चाएको देखिएको छ । बुधबार रातिदेखिको अविरल वर्षापछि भक्तपुरमा आएको बाढी पहिरोमा परी तीनजनाको ज्यान गएको छ । त्यस्तै पचासभन्दा बढी घरपरिवार विस्थापित भएका छन् ।
कार्यक्रममा भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले अविरल वर्षाले पु¥याएको क्षति, खोज तथा उद्धारसँगै राहतका लागि भएको कार्यबारे जानकारी दिए ।
भक्तपुरका चारवटा नपाका प्रमुखहरु क्रमशः भक्तपुरका सुनिल प्रजापति, मध्यपुर थिमिका मदनसुन्दर श्रेष्ठ, चाँगुनारायणका सोमप्रसाद मिश्र र सूर्यविनायकका वासुदेव थापाले आआफ्नो नगर क्षेत्रमा भएका क्षति, उद्धार र राहत वितरण कार्यबारे जानकारी गराएका थिए ।
बैठकले विपद् प्रभावितहरुलाई नगरपालिकामार्फत एकाद्वार प्रणालीबाट राहत तथा खाद्यान्नलगायत वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । अमुक संघसंस्थाको नाउँमा सांसद, नेतालगायतले राहत वितरण गरेर सामाजिक सञ्जालका भित्ता भर्ने काम नगर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले आह्वान गरे ।
बैठकले भक्तपुरका चारवटै नगरमा भएको सम्पूर्ण क्षतिको विवरण तीनदिनभित्र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै बैठकले आगामी दिनमा पुनः क्षति हुन नदिन विपद् प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन गरी समाधानतर्फ जान प्राविधिक टोली खटाउने निर्णय गरेको छ ।